DAAWO VEDIO: Somaliland oo Warqad Cabasho ah u gudbisay madaxda ugu sareysa BBC-da ee London iyo Nairobi – Marqaanmedia24.com
March 13, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 8
Maamulka Somaliland ayaa warqad cabasho ah waxay u gudbisay madaxda ugu sareysa Warbaahinta BBC-da ee ingiriiska fadhigeedu uu yahay.
Warqadaasi oo ay kaga cabanayaan dhex dhexaadnimo la’aan ay ku eedeeyeen laanta Afka Soomaaliga ee Idaacada BBC-da,Waxaana Wasiirka Warfaafinta,dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland C/raxmaan C/laahi Faarax Guri Barwaaqo uu warqad u kala diray madaxda ugu sareysa BBC-da ee ku kala sugan London iyo magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Wakaaladda Wararka Somaliland ee SOLA ayaa ku warantay in Somaliland ay cabasho ka qabto doodaha la xiriira qadiyada Soomaaliya iyo Somaliland ee ka baxa Idaacada BBC-da,waxayna Somaliland sheegtay ineysan dhex dhexaad ka noqon siyaasiyiinta labada dhinac ama si siman doodaha loogu qeybin.
BBC Ma Ictiraaf bay Bixisaa waa yaabe. Saxaafadda Engrisku waa Xor ma aha sida tan africa ee ay qabiil ama qof iska maamusho Somalilandna ma aha meel la aqoonsan yahay oo Mapka laga helayo.
War ileyn anagaa wax aragnay !
Saxaafadu inkasta oo ay xor tahay, hadana meesha waxa ka socda BBC da oo dhex isku sheegta aya waxaa gondaha u galay niman hab siyaasadaysan meeshiiba u afduubtay oo wax la yidhaahdo free speech ku daba dhuunta. Ciday doonaana waxay doonaan ka sheega. Somaliland iyada oo ka duuleysa danaheeda gaarka ayay cabasho ka muujisaa dhex dhexaad li’ida ragan BBCda u shaqeeyaa kula kacaan had iyo goor.
BBCdu waxay aheyd radio qiimo fac weyn oo qadiimi ahaa. Markii ragii la yaqaanay ka shaqayn jireen waxay laheyd warar caadifad la’aan ah iyo barmaamijyo xiiso badan. Wararka galabta iyo habeenkii gurina muu dhaafi jirin. Dadkaan xitaa radio yada laheyni makhaayadaha iyo guryaha kale ee uu warku ama barmaamijku ka shidan yahay ayay tegi jireen. Waxaan xitaa garanayaa oday dalici jiray radiyoowga si jaarku ula dhegeystaan.
Imika’se waxay noqotay madhax. Nasiib wanaagse, Soomaaliyi meel walba oo ay joogtaba waxa ay yeelatay TVo iyo Idaacado badan oo lagaga maarmay riyoolaashan qudhmiyay idaacadii wax ku oolka ahaan jirtay ee ka soo saaray sameecad yar oo midba wuxuu doonto kaga hadhadaaqo.
BBC WAA CADI EE ADENKA WAXA JIRIN ISKA DHAADHACIYAY.EE CADI ISKA DHIGA SIDA MAMUL GABELEDYADA KALE DOWLADA DHINICENA KARACA/KISMAYO CMIL AYAA TIHIINE
Suldaan dab la ridey salaan qaali ah
Waa iga qoslisay ictiraafkii miyaa galay bbc somali waa laga yaabaa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
You know why bbc somali hada waxaa ka shaqeeyo somaliweyn ahmed hadalkiisa ayaan ka dhadhansaday in bbc xalaal ahayd markii reer waqooyi keliya ka shaqeyn jireen hadase waa somaliweyn that’s why dhaxdhaxaad maahan cisman basbaas ayaa yaabay kkkkkkkk waa ku salaamay.
@ Malaaq Boondheere……Salaanti Madaxda Malaaq.
Sxb Ictiraafki Isaaqa Meel Walba wuu galay xitaa haddaad doonaysid in aad gabadh ka Guursatid Horta waa in aad Ictiraaftaa somaliland markaas baa gabadha lagu siinayaa.
Malaaq Boondheere Anigaa ku soo wacaya Beryahan Mashquul baan yare Noqdey.
@ Malaaq Boondheere,
Malaaq iga guddoon salaantii ka dhexeyn jirtay Salaaddiinta Sanaag iyo Malaaqyada Muddulood. Adiga ayaa iga qosliyay markii aad tidhi:
“ahmed hadalkiisa ayaan ka dhadhansaday in bbc xalaal ahayd markii reer waqooyi keliya ka shaqeyn jireen hadase waa somaliweyn that’s why dhaxdhaxaad maahan cisman basbaas ayaa yaabay” kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
PRICELESS OBSERVATION MALAAQ BOONDHEERE! YOU HIT THAT ONE RIGHT WHERE IT HURTS MOST!
Yaanay kula taraarixin bahashu. Anigu qabiil ma sheegin xitaa Reer Woqooyi ma odhan. Waxaan idhi uun BBCdu berigay weriyayaasha tayada lihi ka shaqeyn jireen ayay wax aheyd. Ama reer Woqooyi ha u badnaadeen ana yaanay u badane tayo ayaan anigu ka hadlay. Ku daraoo berigii hore xitaa weriyayaasha koonfur ka yimaadaa waxa ku hadli jireen lahjadii idaacadaha la’isku afgartay in barnaamijyada lagaga sii daayo. Imikase nin walbaaba lahjadiisa ayuu iskaga hadlaa. Kkk
Boondheerow Somaliweyn haday BBCda maanta ka shaqeyso ood rabto in la faaniyo dee tayadooda ha kordhiyaan, wararkooduna ha noqdaan kuwo saafi oonan dhinacna u janjeedhin oo isku dheeli tiran. Siyaasadana faraha hakala baxaan.
Intaas aan idhi hadii ay wax kale kaaga dhex khaakhaayireen waa wax uurka kuugu sii duugnaa ee ogsoonow.
scw salaan sare
saaxib horta caadi iska golahan marqaan waa sida aan u aadno cafe shop like Starbucks weligeedba xifaaltan goboleedka waa wax dabiici ah weliba reer waqooyiga ayaa si xun u caayo reer koonfurka waxaa ka mid sida wanlaweyn qadaad weyn oo loola jeedo jareer ama bantu waa jiraan dadkaas somaliyeed ee la dulmay lkn koofur waxaa dagan somali inta ugu bada hadana waxaas dhib uma aragno tusaale hadii 3 nin oo reer waqooyi ah iyo 3 nin oo reer koonfurka oo meel wada taaganyihiim oo aysan hadlin makala saari kartaa?waa maya
waxaad af somali nooga dhigteen waxaa ka mida
iyo ereyo badan oo wada ah hindi carabi ingriis
waaba ogolnahay ereyada af somaliga sida laxoox jaajuur shalmad bigys
mana necbin reer waqooyo lkn qof lahjadiisa ku hadlay ceeb maahan
tan noogu daran reer koonfur ahaan oo aad iyo uga naxnay waa markaad tiraahdeen gabadheydi ayaa foolanayso kii reer xamarna yiri ee aaway ninkeedi reer waqooygii yiri dee waa aniga kii reer xamar waa ashahaatay taas lee badala kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Waa ku salaamay kaftan.com